WodPress 5.5: inouya nechinhu chinonakidza | Linux Vakapindwa muropa
WodPress 5.5 - inosvika nechinhu chinonakidza
WordPress 5.5 yauya nedzimwe nhau hombe munguva pfupi yadarika. Iyo inozivikanwa CMS (Yemukati Management Sisitimu) kana yakavhurwa sosi yemukati manejimendi manejimendi haimire mukukura kwayo kusinganeti kuitira kuti mapeji ewebhu akavakirwa pairi arambe achivandudzika, pamwe nekuita kuti hupenyu huve nyore kune avo vari mukutarisira kwavo (kunyangwe dzimwe nguva pane zvigadziriso zvisingadiwe nemunhu wese ...).
Zvino, nekuburitswa kweWordPress 5.5 kunosvika akawanda makuru ekuvandudza. Zvimwe zvacho zvinokatyamadza, uye zvichatora zvakawanda nekushamisika. Asi zvirokwazvo uchavafarira, uye vamwe vanozokosheswa nevatungamiriri, nekuti zvichaita kuti basa ravo rikurumidze, nyore, uye rinotogadzirwa mune dzimwe nguva.
Pindai nhauNgatione zvakakwidziridzwa zveWordPress 5.5:
Otomatiki plugin uye zvinyorwa zvinyorwa. Dai iwe wanga waneta nekugadzirisa ako plugins uye madingindira akaiswa pawebhusaiti yako maviri kana matatu, ikozvino hauchazodi kupindirwa uye zvinozoitwa kumashure. Nekudaro, icho chinhu chinogona kuvhurwa kana kudzimwa.
Bvisa mamenu muGutenberg. Haasi munhu wese aifarira mupepeti mutsva, asi zvinonyanya kushanda kana ukajaira kuishandisa. Iyo ine zvayakanakira nezvayakaipira, asi ikozvino zvinouya nekumwe kunatsiridza kusanganisa mamenyu ekufambisa semabhuroko.
Block Directory. Ichachinja iro rese WordPress ecosystem, ese ma plugins nemusoro Zvino, kana iwe uchida block uye haina kuiswa, unogona kuitsvaga kubva kumharidziro pachayo, kuiisa, uye kuimisa.
Native XML sitemaps.
Nhengo yeusimbe kurodha. Ichauya nehusimbe kurodha basa, ichiwedzera iyo yekukanda hunhu ine husimbe kukosha mune ese img ma tag, kunyangwe ichizoremekedza zvakapfuura hunhu zvaunazvo. Izvo zvinokonzeresa kuti mufananidzo uve nehusimbe mutoro pane yako saiti.
Yakagadziriswa bugs, uye nezvimwe…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WodPress 5.5 - inosvika nechinhu chinonakidza
Colibri, iyo multiplatform web browser yakagadziriswa kuti ikurumidze uye isarasika pakati pemakumi mazhinji ematabhu